मुना २०६६ बैशाख – मझेरी डट कम
समयमै गर्नुपर्छ आफ्नो-आफ्नो काम
काम गर्नसके मात्र रहन्छ है नाम ।
घरमै पढ्छु क, ख, ग….
सानो-सानो हाम्रो घर
पाखुरीमै भर्छु भर!
पढ्नुपर्छ लेख्नुपर्छ खेल्नुहुन्न धेर
स्कुल जाने समय फाल्नुहुन्न खेर
मेरो सानी छोरी पिऊ, पानी घुटु घुटु
पिउँदा पानी हर्रर जिउ सर्रर मुटु मुटु
बाबाआमा हामीलाई किनिदिनु
खानेकुरा भन्दा पनि पढ्ने कुरा दिनु ।
मेरो सानो पाठो छ
धेरै धेरै बाठो छ
पछि पछि दगुर्छ ।
सानो हातमा घडी
ठूलो हातमा घडी
समयको ज्ञान दिने
सबैको हातमा घडी ।
फलामले बनेको हुँ खन्ती मेरो नाम
धस्सिएर धर्ती खन्नु मेरो पैलो काम
कामी दाइका आरनमा खारिएको म
तताएर तिखोतिखो पारिएको म
पुरानाको बिसर्जन रे नयाँ पालुवामा
फुल्दैछन् रे कुत्लीकोशा तातो बालुवामा
मन्द हावा सुसेलिओस् सल्लेरीमा सिर्का
आधार बनोस् नेपालीलाई सुशान्तिको पिर्का ।
इरान देशमा पहिले राजा थिए । उनी जनताको भलाइ गर्न सधैँ अगाडि सर्थे तर पनि देशका पहाडी जिल्लाहरूमा बस्ने मानिसहरू गरिब थिए । धेरैले भेंडा चराएर आˆनो जीवन चलाउँथे । उनीहरूको जीवन भेंडा गोठालामा नै बित्थ्यो । एउटा गाउँमा दारा नाम गरेको एउटा भेंडा गोठालो थियो । अरू गोठालाहरू जस्तै उसले पनि लेख्न पढ्न जानेको थिएन । ऊ कहिल्यै पनि स्कुल गएन । तर ऊ धेरै बुद्धिमान र सरल थियो ।
रामु झोलालाई माया गर्दैनथ्यो । ऊ विद्यालयबाट घर पुगेपछि झोला फुत्त भुइँमा पछार्दथ्यो । एकदिन मात्र होइन, रामुले सधैं झोलालाई त्यसै गर्दथ्यो ।
वसन्त पञ्चमीको दिन । एकाबिहानै एउटा भाले जुरेली अग्लो रूखको टुप्पामा बस्यो र सुरिलो स्वरले गीत गाएर वसन्त ऋतुको आगमन भइसकेको घोषणा गर्‍यो । नववसन्तको स्वागतमा आ-आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारीमा लाग्न पनि त्यसले गीतकै भाषामा सम्पूर्ण प्राणीजगत्लाई निवेदन गर्‍यो ।
एउटा रमणीय घना जङ्गल थियो । जहाँ स्याल, मृग, सिंह, भालु, बाघ, चितुवा, जरायो आदि इत्यादि जनावरहरू बस्थे ।
एकपटक चार-पाँचजना मृगहरू मिलेर जङ्गली फलफूल टिपी जङ्गलको खुला ठाउँमा बसेर बाँडीचुँडी खान लागेका थिए । त्यही बेला एउटा चतुर र धूर्त स्याल घुमिफिरी त्यहाँ आइपुग्यो ।